नेहा–आदित्यको विवाहलाई लिएर उदित नारायणले गरे यस्तो खुलासा! « Deshko News
नेहा–आदित्यको विवाहलाई लिएर उदित नारायणले गरे यस्तो खुलासा!
काठमाडाैं , माघ २८
आदित्य नारायण झा र नेहा कक्कडको सम्बन्धका कारण भारतीय गायन प्रतियोगिता इन्डियन आइडल चर्चामा आइरहेको छ । यसअघि दुबैको भ्यालेन्टाइन्स डेमा विवाह हुने खबर सार्वजनिक भएको थियो । तर यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आदित्यका बुवाले केही नयाँ कुराको खुलासा गरेका छन्।
इन्डियन आइडलमाथि टिआरपी बटुल्नका लागि यस्तो गरिएको आरोप लागेको थियो । यो कुरा वास्तविक हो जस्तो बुझिएको छ किनभने आदित्यका पिता उदित नारायणले यसलाई अफवाहको संज्ञा दिएका छन् । एक भारतीय संचारमाध्यमसँगको कुराकानीमा उदित नारायणले भनेका छन्, ‘आदित्य हाम्रो एक्लो छोरा हो । हामी उनको विवाहको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । यदि विवाहको अफवाह साँचो हुँदो हो त हामी संसारकै भाग्यमानी आमा–बुवा हुने थियौं । तर आदित्यले हामीमाझ यसबारे केही कुरा साझा गरेका छैनन् ।’
उदितले थपे, ‘मलाई लाग्छ नेहा कक्कड र आदित्यको विवाहको अफवाह टिआरपीका लागि उडाइएको हो । यहाँ नेहा निर्णायक छिन् भने मेरो छोरा उद्घोषक हुन् ।’ आदित्य नारायणले नेहा कक्कडसँगको विवाहका लागि च्यानलमा सहमती जताएका थिए । आदित्यले फेब्रुअरी १४ मा कार्यक्रममा नै विवाह गर्ने बताएका थिए । च्यानलले यी दुईको विवाहको कार्डसमेत छापेको थियो ।